Chikamu chekuziva iwo mukana wekushambadzira kunzwisisa mashandisiro anoita vatengi vako zvigadzirwa zvako nemasevhisi. Vashandi vedu vari kushanduka zvinoshamisa mudiki uye epakati-saizi bhizinesi chikamu (SMB) chikamu. Kana bhizinesi rako richishandira SMB's, iwe unofanirwa kuona kuti iro riri kure rekushanda simba uye kubatanidza zvishandiso zviripo kuti uwane zvakakwana zvigadzirwa zvako nemasevhisi.
Kana iwe uri B2C, nzwisisa kuti maawa ebasa ari kuchinja uye maitiro ekutenga ari kuchinja. Nepo zvitoro zvekutengesa zvichishandira vatengi masikati uye kupera kwevhiki, ecommerce iri kubata mamwe ese mamwe maawa. Kana usiri kutora mukana weshanduko iyi mumaitiro, uri kurasikirwa
Mumakore ese apfuura takaona zvichitorwa muboka idzva reSMB - "Progressive SMB," masangano ari kuramba achipindira munharaunda yevanokwikwidza. Asi chii chinoita kuti SMB ifambire mberi? Kubva kuCisco's infographic, Kuwedzera kweiyo Inofambira mberi SMB.